Nakidzwa Game Game mitambo pane yako Apple Tarisa | Ndinobva mac
Nakidzwa Game Game mitambo pane yako Apple Watch
Haisi nguva yekutanga, kana kuzove yekupedzisira, kuti musimudziri anoisa sisitimu yekushandisa pane chishandiso chisina kugadzirirwa. Mazuva mashoma apfuura mugadziri akakwanisa kuteedzera vhezheni yeWindows XP pane iyo iPhone 7 uye kunyangwe mhedzisiro yacho yakasiya zvakawanda kuti zvidikanwe, tinogona kuona kuti fungidziro yevamwe vagadziri haina miganho. Mukushaikwa kwemashandisirwo akagadzirirwa Apple Watch, tisingataure mitambo, mugadziri akangoratidza ekutanga mifananidzo yeiyo Game Boy emulator iye arikushanda, emulator inotibvumidza isu, kuchengetedza madaro, kunakidzwa neyedu mitambo yatinofarira kubva pachiuno chedu.
Kana iwe uchida emulators, ini ndakavhura sourced Game Game emulator yeApple Watch, ndokunyora nezvazvo pano! https://t.co/cozkMzI8Bq #Pokemon pic.twitter.com/pKwLLEmfnJ
- GABRIELOFLAHERTYCHAN (@_gabrieloc) March 17, 2017
Iyi emulator, inonzi Giovanni yakavhurwa sosi uye inowanikwa kune chero mugadziri paGitHub. Sezvazviri muzvinyorwa zvekutanga, kuvandudzwa kwemitambo kunononoka kupfuura zvataigona kushuvira pakutanga, asi inoyevedza feat tichifunga nezvezvikanganiso zvese zviri zviviri Hardware uye software inopihwa neApple Watch.
Zvinoenderana nemugadziri, chimwe chezvinhu chakamutsa chinetso chikuru kwaari ndechekuti akashandisa mabhatani kuti akwanise kunakidzwa neamulator. Korona yeApple Watch inotibvumidza isu kukwira kumusoro kana pasi apo kuti tifambe kubva kurudyi kuenda kuruboshwe isu tinongofanirwa kubaya pachiratidziri. Nezve mabhatani ekuita isu tinofanirwawo kubaya panzvimbo yepakati pechigadzirwa, chikamu chepasi, nepo muchikamu chepamusoro pane mabhatani ekutanga uye Sarudza.
Zviripachena hakusi kugoverwa kwakaringana kwevashandisi vese asi nekuda kwekushayikwa kwenzvimbo, uyeMugadziri akaedza nepaanogona napo kuti mitambo inakidze, kunyangwe kwemaminetsi mashoma. Parizvino, mushambadzi anoti aburitsa kodhi uye haachazoibata zvakare kusvikira Apple yaparura zviri pamutemo watchOS 4, iyo ichazoburitswa mubeta rinotevera June mumamiriro eWWDC.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Nakidzwa Game Game mitambo pane yako Apple Watch
Maka Gurman, anotaura nezve nhanho dzeApple neAugmented Reality
Password Injiniya Pro inotibatsira kugadzira mapassword akasimba